UDlamini-Zuma ‘unengwa’ abathi ufuna ukuvikela uZuma ekushushisweni | News24
UDlamini-Zuma ‘unengwa’ abathi ufuna ukuvikela uZuma ekushushisweni
Johannesburg - UNkosazana Dlamini-Zuma usekuchithile ukugxekwa kwakhe ngokuthi ukufuna kwakhe ukuthatha izintambo kuMengameli Jacob Zuma kwesokuba nguMengameli kuyisu lokumvikela ukuze engeke ashushiswe ngamacala obugebengu.
UDlamini-Zuma, nowayenguSihlalo we-African Union, ungomunye wabaholi abahamba phambili okubhekwe ukuthi bazothatha izintambo kuZuma kwesokuba nguMengameli we-ANC kanjalo nesokuba uMengameli wezwe eminyakeni emibili.
UMengameli Zuma waziwa kakhulu njengomuntu osekela uDlamini-Zuma, nanezingane ezine naye, okunoCyril Ramaphosa embangweni ongase uhlukanise phakathi i-ANC.
UDlamini-Zuma utshele i-AFP ukuthi ukuthola “kunenga” ukubonakala njengokhethwe yilowo owayengumyeni wakhe ukuze amvikele ekushushisweni uma ngabe esephuma ejele.
OLUNYE UDABA:Izinsongo zokubulawa, umdonsiswano ezinkantolo embangweni wokuhola i-ANC
“Angeke ngikhethwe uMengameli Jacob Zuma,” usho kanjalo ngemuva kokwethula inkulumo eGoli.
“Uma ngabe ngikhethwa, ngizokhethwa abantu abaseNingizimu Afrika futhi bazobe benezizathu zokuthi kungani bekhetha mina.”
UDlamini-Zuma, 68, nowayenguNgqongqoshe kwiKhabhinethi, akakakumemezeli emphakathini ukuthi uzongenela umbango wokuhola i-ANC.
Kodwa ubelokhu ekhankasa ezingxenyeni eziningi zezwe emasontweni adlule, ebheka ukwesekwa ngaphambi kwengqungquthela yeqembu yokukhetha ubuholi ngoDisemba, nalapho izithunywa zizokhetha khona umholi omusha.
UZuma, nozophuthula ihlandla lakhe lokugcina esehhovisi ngo-2019, angase abhekane nenqwaba yamacala asezinkantolo nokubalwa kuwo amacala alinganiselwa ku-800 enkohlakalo angase avuswe nathinta isivumelwano sango-1990 sezigidigidi zamarandi sokuthengwa kwezikhali (arms deal).
UNkosazana Dlamini Zuma ekhuluma noMengameli Jacob Zuma ngesikhathi kubungazwa ukuqokwa kwakhe njengoSihlalo we-African Union Commission ngo-2012. (GCIS)